Semalt Expert dia manoritsoritra ireo karazana tranokala WordPress 12 azonao atao
WordPress dia angamba ny sehatra fitoraham-bilaogy mafonja indrindra sy ny votoatim-pitantanana ao amin'ny sehatry ny varotra amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny taona vitsy lasa, WordPress dia nanomboka nahazo ny lazany ho fitaovana mora ampiasaina raha ny famoronana bilaogy. Amin'izao fotoana izao, WordPress dia ampiasain'ny mpitrandraka an-tapitrisany sy ny mpandraharaha mavitrika mba hamoronana tranokala manomboka amin'ny tranonkala matihanina ho an'ny bilaogy manokana.
Amin'izao fotoana izao, ny fampahalalam-baovao, bolongana malaza, ary tranonkala mozika dia mampiasa WordPress hikapoka ny tsenam-bariny amin'ny fotoana. Ao amin'ny sehatry ny varotra, ny tranonkala WordPress dia sokajiana ho tsara indrindra.
Oliver King, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt , dia manome lisitra karazana tranokala 12 izay afaka mamorona mora ampiasaina amin'ny WordPress.
1. Tranonkala E-varotra
WordPress dia ahitana plugins feno sy lohahevitra tena tsara mba hamoronana tranokala e-commerce mahasoa. Ny vohikala E-varotra novolavolaina amin'ny WordPress dia ahitana endri-javatra manan-danja izay ahafahan'ny mpivarotra hitantana ny vidy ary hampiditra sarintany. Ny tranokalan'ny WordPress ihany koa dia manamora ny fandefasana fiantohana sy fandefasana azo antoka amin'ny alalan'ireo tranokala.
Miasa amin'ny famoronana orinasa orinasa ve ianao? WordPress no fitaovana tsara indrindra ho anao. Ampiasao ny WordPress hanangana tranokala fanatanjahan-tena ary ahazoanao fahafahana hampiditra ny antsipirian'ny orinasa sy ny fametrahana rohy ao amin'ny tranonkalanao. Ny tranokalan'ny WordPress dia mamela ireo mpitsidika hitady andiam-barotra.
3. Wiki-style tranonkala
Manamora ny votoatiny amin'ny famoronana ny tranonkalanao mampiasa WordPress. Raha fantatra amin'ny anarana hoe tranonkala fahalalana, ny tranonkala wiki dia mitaky fifandraisana anatiny amin'ny antontan-taratasy sy lahatsoratra. WordPress dia manome fahafahana ho an'ireo manam-pahaizana hanasokajiana votoaty amin'ny fampiasana tags sy sokajy.
4. Fikambanana mifototra amin'ny aterineto
Ampiasao ny WordPress mba hananganana ny vondrom-piarahamoninao an-tserasera mifototra amin'ny lohahevitra tena tianao. Manana fahafahana hizara ny votoatiny amin'ny mpitsidika. Ampiasao ny lisitry ny mpitsidika mba hamorona lisitra mailaka izay naneho hevitra momba ny votoatinao..Ny tranokalan'ny WordPress dia ahafahan'ny mpitsidika mametraka mora foana ny tranokalan'ny vondrom-piarahamonina.
5. Tranonkala akademika
Ampiasao ny WordPress mba hamoronana tranonkala academic ary hahazo fahafahana hampiditra loharano mifandraika amin'ny fahaiza-manao isan-karazany. Omeo mpampianatra sy manam-pahaizana amin'ny antsipiriany ny sonia mba ahafahana mametraka mora foana sy mampiditra votoaty mahasoa ao amin'ny tranokalanao.
6. Affiliate marketing web site
Ny vohikalam-pivarotana Affiliate dia matetika fantatra amin'ny maro toy ny tranonkala filalaovana niche. Amin'ny famoronana tranonkala fifaneraserana amin'ny alàlan'ny fampiasana WordPress, afaka mahazo vola fanampiny ianao amin'ny fanofana fifamoivoizana marina amin'ny tranokalanao. Maro ireo mpitsidika no afaka mamarana ny fividianana vokatra voaresaka ao amin'ny hafatrao.
7. Ny vohikala portfolio-style
Aoka ny vokatrao, ny endri-javatra ary ny zavakanto no ataonao ny resaka. Ny tranonkala WordPress dia ahitana ny lohahevitra sy ny endri-javatra izay manolotra mpanakanto fahafahana haneho ny fahaizan'izy ireo amin'ny mpitsidika.
8. Ny asa fiandraiketan'ny fiarahamonina
Ampiasao ny WordPress mba hamoronana birao amin'ny aterineto izay ahafahan'ny mpanjifa mametraka sy mahita asa mora. Site WordPress dia mora ny mitantana sy manamboatra
9. Sary tranonkala fototry
Mamorona tranonkala fototarazo ampiasaina amin'ny WordPress mba hahitana ireo lohahevitra momba ny Tempolin'i Wiral sy Pingraphy ao amin'ny tranokalanao. Alefaso any amin'ny tranokalanao ny sary nefa aza mifanojo amin'ny fahadisoana ara-teknika.
10. Website tranonkala
Mifidiana karazana lohahevitra sy sokajy ho an'ny tranokala WordPress ary mitantana ny drafitra mifanaraka amin'ny fepetra momba ny raharahanao.
11. Tranokalan'ny blôgy
Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fahombiazan'ny tranonkala blôgy ny WordPress. Ny tranonkala WordPress dia mety ho azon'ny olon-drehetra vonona hanana tranonkala.
12. Tranonkala News and Magazine
Ny mamaky azy ho an'ny mpitsidika sy ireo mpanjifa mety hitady ny votoatinao dia ny zava-dehibe rehetra rehefa mamorona tranokala vaovao sy tranonkala. Ny tranokalan'ny WordPress dia manome fahafahana ny mpanao gazety hamoaka vaovao avo lenta.
WordPress no safidy tsara ho an'ny mpivarotra sy mpanao gazety miasa amin'ny fiara fitaterana amin'ny tranonkala. WordPress dia mifototra amin'ny lohahevitra ampy, plugins ary sokajy hifidy. Raha miasa amin'ny fananganana tranokala ianao, WordPress no safidy tsara indrindra hijerena Source .